Iimpawu zoLwazi lweFlamme zenziwe njani
Sayensi I molecule
Ukucacisa indlela i-Flame Colors ehambelana ngayo neeElectron
Uvavanyo lwetangatye lusetyenziso lwekhemistry oluchanekileyo olusetyenziswa ekuncedeni ukubona ion isimbi. Nangona uvavanyo lokuhlalutya oluluncedo (kunye nolonwabo oluninzi lokwenza), alinakusetyenziswa ukuchonga zonke izitishi kuba azikho zonke ion zazo ezivelisa imibala yomlilo. Kwakhona, ezinye ion iitoni zibonisa imibala efanayo. Ngaba uye wakha wazibuza ukuba imibala iveliswa njani, kutheni ezinye zinyithi zingenabo, kwaye kutheni iimbini ezimbini zinika umbala ofanayo?
Nantsi indlela esebenza ngayo.
Ukushisa, ii-Electrons, kunye ne-Flame Test Colors
Kukho konke ngamandla ashushu, ii-electron , kunye ne-energy photons .
Xa uqhuba uvavanyo lwetangatye, uhlambulula i- platinum okanye i-nichrome wire nge-asidi, yinyunde ngamanzi, uyidibanise kwindawo eqinile uvavanya ukuze ibambelele kwintambo, ubeke intambo kwintlambo, kwaye ugcine nayiphi na utshintsho umbala womlilo. Imibala egcinwe ngexesha lokuhlolwa kwetangatye ngenxa yoluvuyo lwama-electrons obangelwa ukushisa okwandisiweyo. Ama-electrons "agxuma" ukusuka kummandla womhlaba ukuya kumgangatho ophezulu wamandla. Njengoko babuyela kummandla womhlaba bavelisa ukukhanya okubonakalayo. Umbala wokukhanya uqhagamshelwe kwindawo yee-electron kunye nokudibanisa kweefowuni ze-shell zingaphandle ziye kwi-nucleus ye-athomu.
Umbala okhutshwe ngama-athomu amakhulu kuncinci kumandla kunokukhanya okuphuma kwiion iincinci. Ngoko, umzekelo, i-strontium (inombolo ye-athomu yesi-38) inikeza umbala obomvu ngokuthelekiswa nombala ophuzi we-sodium (inombolo ye-athomu 11).
I-ion ine-intononi ngakumbi kwi-electron, ngoko kufuneka amandla amaninzi afake i-electron. Xa ama-electron enza i-movie, iya kwimeko ephakamileyo. Njengoko i-elektronsi ihla kumhlaba ichaza amandla amakhulu okusabalalisa, oku kuthetha ukuba umbala unomlinganiselo ophezulu.
Uvavanyo lwetangatye lungasetyenziselwa ukuhlukanisa phakathi kwamaziko e-oxidation yee-athomu enye into, nayo. Ngokomzekelo, ubhedu (I) lukhanyisa ukukhanya okwesibhakabhaka kwisilingo somlilo, ngelixa ubhedu (II) luvelisa ilangabi eliluhlaza.
Iityuwa zetsimbi ziqukethe ication cation (isinyithi) kunye ne-anion. I-anion inokuchaphazela umphumo wophando lwangatye. Ubhedu (II) kunye ne-non-hadede ivelisa ilangatye eliluhlaza, ngelixa ubhedu (II) bubeka isivuno somlilo ohlaza okwesibhakabhaka. Uvavanyo lwetangatye lungasetyenziselwa ukunceda ezinye izinto ezingekho zinyithi kunye ne-metalloids, kungekhona nje insimbi.
Uluhlu lweemibala yovavanyo lomlilo
Imiba yemibala yokuhlola yelangabi zama ukuchaza i-hue yelangatye ngokuchanekileyo ngokunokwenzeka, ngoko uza kubona amagama ombala aphikisana nalabo bhokisi enkulu yeCrayola yeekrayoni. Izinyithi ezininzi zivelisa ama-flames ahlaza, kunye nezohlukeneyo zemibala eyahlukileyo kunye nobomvu. Indlela efanelekileyo yokuchonga ion yensimbi kukuqhathanisa nesethi yemigangatho (ukwakheka okwakhiwayo), ngoko uyazi ukuba umbala ulindele ukusebenzisa uphethiloli kunye nobuchule kwibhubhoratri yakho. Ngenxa yokuba kukho izixhobo ezininzi, ukuvavanya kuphela isixhobo esinokukunceda ukuchonga izixhobo kwi-compound, kungekhona uvavanyo oluchanekileyo. Ziqaphele naluphi na ukungcola kwepetroli okanye i-loop kunye ne-sodium, ekhanyayo ephuzi kwaye imisa imibala eminye imibala.
Amafutha amaninzi ane-sodium contamination. Unqwenela ukugcina umbala wovavanyo lomlilo ngefayile eluhlaza okwesibhakabhaka, ukususa naluphi na ophuzi.
Umbala womlilo Metal Ion
emhlophe tin, khokela
mhlophe i-magnesium, i-titanium, i-nickel, i-hafnium, i-chromium, i-cobalt, i-beryllium, i-aluminium
elibomvu (obomvu obomvu) strontium, yttrium, radium, cadmium
bomvu i-rubidium, i-zirconium, i-mercury
obomvu obomvu okanye i-magenta lithium
i-lilac okanye i-violet eluhlaza potassium
i-blue blue selenium, indium, bismuth
luhlaza i-arsenic, i-cesium, ithusi (I), indium, i-lead, tantalum, i-cerium, isulfure
eluhlaza okwesibhakabhaka ubhedu (II) i-halide, i-zinc
eluhlaza okomhlaza okomhlaza i-phosphorus
luhlaza zobhedu (II) ezingekho-hadede, thallium
i-apula eluhlaza okanye eluhlaza i-barium
eluhlaza tellurium, i-antimony
oluhlaza okomhlaza i-molybdenum, i-manganese (II)
ephuzi elikhanyayo sodium
golide okanye i-yellow yellow isinyithi (II)
orenji i-scandium, isinyithi (III)
i-orange kwi-red-orange calcium
Izityebhe ezintle zegolide, isilivere, iplatinum, kunye ne-palladium kunye nezinye izinto azivelisi umbala wovavanyo lomlilo. Kukho izizathu ezininzi zezi zinto, enye yazo ingaba namandla omshushu akwanele ukukhuthaza ama-electron ezi zinto ngokwaneleyo ukuba zinokutshintsha ukukhulula amandla kwibala elibonakalayo.
Enye ingxaki yokuhlolwa kwetangatye kukuba umbala wokukhanya obonwayo uxhomeke kakhulu kwi-chemical composition of flame (umbane otshiswayo). Oku kwenza kunzima ukufanisa imibala eneesatidi enezinga eliphezulu lokuzithemba.
Olunye uvavanyo oluvuthayo lomlilo luvavanyo lwe-bead okanye uvavanyo lwe-blister, apho isalathisi ityuwa ifakwe kwisampuli kwaye yatshisa kwi-flame yeBunsen. Olu vavanyo luchaneke ngakumbi ngakumbi kuba isampuli esithe xaxa sinamathele kwi-bead kunomgca wocingo olulula kwaye ngenxa yokuba i-burns eninzi ye-Bunsen ifakwe kwigesi yendalo. Igesi yendalo itshisa ngomlilo ococekileyo. Kukho iifayile ezingasetyenziselwa ukususa i-flame ebomvu ukujonga umbane okanye umphumo wokuvavanya ibhanti.
Izakhiwo zeMichiza eziQala ngeNcwadi yeS
Inkcazo ye 'Ortho,' 'iMeta,' ne 'Para' kwi-Organic Chemistry
Izakhiwo zeMichiza eziQala ngeNcwadi F
Uhlalutyo olulungileyo kwiKhemistry
Yenza i-Atom Model
Iimpawu zeMichiza eziqala ngeNcwadi V
- Iimveliso eziMzimba
Indlela Yokuthi Yilula Ngama-Alkane Chains
Kutheni iiprotoni kunye ne-Neutrons zibambelela ndawonye?
I-E - Organic Compounds
Izakhiwo zeMichiza eziQala ngeNcwadi E
Funda nge-Hypothesis yeNull kunye ne-Alternative Hypothesis
Inkcazelo yeMadreporite kunye nemizekelo
Umhla woMlando we-Afrika-weMerika: ngo-1980 ukuya ku-1989
10 Ukuthabatha Ukuthandaza iMantis Facts
Izilwanyana ezizodwa eziphezulu kwiGreek Mythology
Indlela yokukhetha iPompa lokuPasa lokuPhanda lokuPhakamisa
Zininzi Kangakanani Iilwimi ZesiNgesi?
Ukunqoba amacebo angabonakali kwiNqanaba lokuQala lokuQala
I-Zodiac njengoko ihambelana noMzimba
Ukulimala kweGerbilling Mishap ezimbini
USusan B. Anthony
Tennessee Kayaking, Canoeing, kunye neRafting
Iimviwo zeeKholeji zaseMarietta
I-Soft Rock Genre Profile
UHerbert Hoover Iinkcukacha ezimfutshane
I-Sole Mio Iingoma kunye neNgesi yokuguqulela umbhalo
Iincwadi NgoLance Armstrong
I-Genealogy of Jesus
Unokufumana njani iiKikititi "Ukuhlala neKelly"
IiFebhu zokuSebenza zeCandelo
Iindaba Zezingane Ngomsebenzi onzima